BAKALOREA : Ho hentitra ary hitory momba ny mari- pahaizana hosoka ny eo anivon’ny Oniversite
Efa hanomboka amin’ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana fahatelo na ny Bakalorea isika eto Madagasikara ato ho ato. 12 septembre 2018
Efa vonona hiatrika izany rahateo koa ny eto an-drenivohitra. Nivoitra nandritra ny famoriana mpanao gazety teny amin’ny Oniversiten’ Ankatso, omaly maraina tokony ho tamin’ny 10 ora sy sasany fa “ho hentitra ireo tompon’andraikitra rehetra eto Antananarivo mialoha na mandritra ny fanatanterahana ny fanadinana”.
Efa am-bolana maro izao no fantatra fa misy ireo olona izay milaza sy mampahafantatra eny amin’ny tambajotran-tserasera fa afaka manamboatra diplaoma hosoka ary mivarotra izany saingy efa mailo ny eo anivon’ny oniversite ary efa nametraka fitoriana sy nandray fepetra hentitra momba izany. Tsy handefitra amin’ireo olona tratra araka izany ireto farany fa tonga dia mihatra avy hatrany ny lalàna.
Mpiadina miisa 74811 moa no voasoratra anarana sy handray anjara aminny fanadinana Bakalorea eto an-drenivohitra ary efa tomombana daholo ny rafitra rehetra sy fanomanana mahakasika izany amin’ity taona ity. Mahatratra 9 ireo kandida vahiny, 4 ireo manana olana ara-pahitana,11 ireo manana olana amin’ny fandrenesana. Fantatra nandritra ny fanazavana hatrany fa 75 taona ny mpiadina zokiny indrindra ary 11 taona kosa ny zandriny indrindra. Ivon-toeram-panadinana miisa 115 no hampiasaina mandritra izay fanadinana izay ka ny fotoana hanatanterahana azy sisa no andrasana.